Wabiga Shabeele oo kufatahay deegaano hoostaga Degmada afgooye | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Wabiga Shabeele oo kufatahay deegaano hoostaga ...
Wabiga Shabeele oo kufatahay deegaano hoostaga Degmada afgooye
Wabiga Shabeelle ayaa waxaa uu fatahaad ka sameeyey tuulooyin hoostaga degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose taas oo saameyn ku yeelatay Beeraleyda ku nool tuulooyinkaas.
Mas’uuliyiin uu horkacayay Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose oo ay kamid ahaayeen Maamulka degmada Afgooye ayaa waxaa ay geeyeen jawaano si loo xiro meelaha uu jabsaday webiga taas oo lagu guuleystay.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali (Najax) ayaa sheegay in ay xireen ilaa Afar meel oo uu wabiga ka jabasaday,isaga oo ku baaqay in loo gurmado dadka ay saameeyeen fatahaada.
“Wxaan wadnaa dadaalo aan ugu gurmanayno dadkeena sidoo kale waxaan ka codsanayaa gudiga gurmadka fatahaadaha DFS/KGS inay qaataan kaalintooda.Shacabka uu saameeyay daadadka iyo fatahaada wabiga ayuu yiri”Guddoomiye Najax.
Si kastaba Wabiga Shabeelle ee mara labada Gobo lee Shabeellooyinka iyo Hiiraan ayaa waxaa uu fatahaad ka sameeyeen detgmooyin iyo deegaano badan, iyada oo dadkii ugu badnaa ay ka barakaceen Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.